Ekhaya Kude Nekhaya e-Invermere, BC. - I-Airbnb
Ekhaya Kude Nekhaya e-Invermere, BC.
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Roger And Lorinda
U-Roger And Lorinda Ungumbungazi ovelele
Jabulela ukubukwa okumangalisayo kwezintaba ze-Rocky kusukela kuvulandi yefulethi lethu lesimanjemanje elitholakala endaweni ethule, efiselekayo ye-Westridge Drive yase-Invermere, BC. Amaminithi azo zonke izinsiza ezidumile, ezifaka ukubhukuda, ukugibela izintaba, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, igalofu, ukushushuluza eqhweni, nokuhamba eqhweni, kwenza lokhu kube isizinda sasekhaya esifanelekile sanoma iziphi izihambi zangaphandle, kungakhathaliseki isizini.
Indawo yesitudiyo ehlotshiswe ngokumnandi okuhlanganisa nombhede ongusayizi wendlovukazi ongu-1, nombhede osofa ongusayizi wendlovukazi ongu-1. Ilungele umbhangqwana owodwa noma emibili, noma umndeni kuze kube abane. Ikhishi lihlinzeka ngezindawo zokupheka ezigcwele, zonke izidlo zakusihlwa kanye nezitsha zokupheka ezidingekayo ukuze kulungiswe ukudla ngemva kosuku olude lokujabulela yonke imisebenzi enikezwa yi-Columbia Valley.
I-Westridge Drive iyindawo yase-Invermere engaphansi kwamakhilomitha ama-2 ukusuka enkabeni yedolobha okuhlanganisa neKinsmen Beach edumile ogwini lweLake Windemere. I-shuttle yamahhala eya e-Panorama Mountain Resort ima ezindaweni eziningi kulo lonke elase-Invermere izikhathi ezimbalwa nsuku zonke, isitobhi esiseduze siba ngaphansi kwamamitha angu-500 phansi komgwaqo.
Indawo ithule kakhulu, inikezela ngemibono emihle yezintaba futhi iwuhambo olufushane oluya ku-Grizzly Ridge kanye ne-Pineridge Mountain trail system.
Kunezindawo ezimbalwa zegalofu ezisezingeni lomhlaba endaweni yase-Invermere, zonke ziphakathi kwemizuzu eyi-15-20 yokushayela noma ngaphansi kwekhaya lethu.
Ibungazwe ngu-Roger And Lorinda
Yize kukhona nendlu esizeni kuhlala umndeni ongabandakanyeki emininingwaneni yansuku zonke yendawo yethu.
Siyatholakala ngocingo noma nge-imeyili ukuze siphendule noma imiphi imibuzo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Umngane wethu ohlala endlini naye unesethaphu yegaraji yokushibilika kwe-tuning/waxing, ngakho-ke uma ufuna ukushaya emithambekeni ngemishini yakho isesimweni esiseqophelweni eliphezulu, vele wehlise amaski akho uma usungenile, futhi ngemali encane azothola. bangene.
Siyatholakala ngocingo noma nge-imeyili ukuze siphendule noma imi…
URoger And Lorinda Ungumbungazi ovelele